भारत सरकारद्वारा पाम आयल आयात माथीको प्रतिबन्ध फुकुवा - Laltin.com
भारत सरकारद्वारा पाम आयल आयात माथीको प्रतिबन्ध फुकुवा
Design is totally my own and all text labels are fully abstract. All photos used in this image are my own from my own portfolio.
भारतले प्रशोधित पाम आयलको आयात बुधबारदेखि खुला गरेपछि नेपालबाट पाम आयल निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। भारतको डाइरेक्टरेट जनरल अफ फरेन ट्रेडले बुधबार सुचना प्रकाशित गर्दै पाम तेलको आयात खुला गरेको हो। भारतले गत बर्ष विश्वब्यापी रुपमै पाम आयलको आयात रोकेको थियो। यसबाट नेपालबाट हुने बार्षिक २५ अर्बभन्दा बढीको निर्यात प्रभावित भएको थियो।
नेपालमा पाम आयलको उत्पादन भने हुँदैन। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत पठाउने हो। यही कारण विगतमा नेपालको निर्यातको सूचीमा पाम आयल एक नम्बरमा थियो। यसैका कारण नेपालको निर्यात पहिलो पटक एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो।
भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर जस्ताको तस्तै पाम आयल निर्वाध रूपमा निकासी गर्न दिएको भन्दै नेपालसँग असन्तुष्टी जनाएको थियो। नेपाल-भारत सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आइजीसी) बैठकमा समेत भारतले असन्तुष्टी जनाएको थियो।
नेपालका उद्योगीले मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट पाम आयात गर्छन्। नेपालमा पाम उत्पादन हुँदैन। बर्ष दिनअघि पाम निकासी बन्द भएपछि उद्योगीले सोयाबिन तेल निकासी गरिरहेका छन्। साफ्टा सम्झौंताको फाइदा उठाउँदै नेपालका उद्योगीले चार वर्षअघि शून्य भन्सार महसुलमा पाम आयल भारततर्फ निकासी गर्न थालेका थिए।
बिगतमा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरेर निकासी गरेको भन्दै आइजीसी बैठकमा भारतले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। तेस्रो मुलुकबाट आयातीत सुपारी अवैध रुपमा भारततर्फ निकासी भएको विषय नेपाल–भारत व्यापार वार्तामा गम्भीर रूपमा छलफल भएको थियो।
Previous: राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँदेखि माथिका ऋणको फाइल अध्ययन गर्ने
Next: वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीद्वारा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शीर्ष चार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग